Ilhaan Cumar “ waxaan waxan warqad u qortay xaakimka maxkamadda, waxana ka codsaday in xukunka uu u khafiifiyo oo aan xukun dheer lagu xukumin Patrick.. | YoobsanNews.com
Nin horay ugu hanjabay in uu dili doona xildhibaan Ilhaan Cumar oo aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ku matesha Minnesota ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala Magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Ninkan oo lagu magacaabo Patrick Carlenio ayaa horay baraha bulshada usoo dhigay hanjabaad uu u jeediyay Ilhaan, wuxuuna ku dhaartay in uu dili doono Ilhaan Cumar.
Ninkan oo ku nool New York ayaa markii uu hanjabadaas jeediyay waxaa soo xiray laamaha ammaanka ee Mareykanka, kuwaas oo in muddo ah u waday ku baaritaan. Patrcik ayaa markii la keenay maxkamadda waxaa xafiiska Ilhaan uu sheegay in uu qirtay dembiga lagu eedeeyay.
“Waxay codsatay in loo naxariisto oo aan xukun dheer lagu xukumin Patrick, waayo waxaa caddaatay in haddii dembigii uu qirtay uu muteysan karo 10 sano oo xarig ah iyo ganaax badan, marka Ilhaan waxay codsatay in loo naxariisto ninkaas maadaama arrimaha naceybka aysan ku ahayn fikir isaga u gaar ah balse ay tahay arrin guud oo dad badan oo siyaasadda ku jira ama madax ah ay qeyb ku leeyihiin”, ayuu yiri Cali Abshir oo ah agaasime ku xigeenka xafiiska Ilhan Cumar.
“Arrimaha isir naceybka waayahan dambe aad bay usoo badanayeen, waana arrin isku xiran balse ninkan hadda keligii umbaa dembiga lagu helay”, ayuu raaciyay
Previous: Israa’iil iyo Iiraan oo qarka u saaran dagaal fool ka fool ah
Next: Almaas Elman, Somali-Canadian Activist, Is Shot Dead in Mogadishu